फेरि चम्कियो देउवाको भाग्यः ‘दुवै हातमा लड्डु नै लड्डु’ – Khula kura
फेरि चम्कियो देउवाको भाग्यः ‘दुवै हातमा लड्डु नै लड्डु’
बालुवाटारस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओली केही दिन यता संसद बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त भएका छन् । तर, बहाली भएछ भने पनि दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर उनको कुनै रुची छैन ।
बरु, पार्टी फुटलाई जतिसक्दो छिटो तलभन्दा तल पु¥याउने हतारो नै देखिन्छ ।
त्यसैले यदि संसद बहाली भएमा लगत्तै पहिलो काम हो, दल विभाजनसम्बन्धी गत वैशाखमा आएको अध्यादेश व्युँताउने र अलग दलको मान्यता लिइहाल्ने । विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पु¥याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुन सक्छ ।
तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यति बनाउने मनसि्थति उनको छ । यसप्रकार दल विभाजन गरिसकेपछि अर्को प्रयास हुनेछ, सरकार टिकाउने ।
संसद विघटन हुनुअघि नै उहाँले साथ खोज्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवासँग । र, अलग दल भएपछि फेरि पनि सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार टिकाउन प्रयास गर्नेछन् । सरकार टिकाउन कांग्रेसको समर्थन नभई हँुदैन । २७५ को बहुमत १३७ हो ।
यसमा ओलीसँग असी हँुदा कांग्रेसलाई जसरी पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । कथं प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदरै भयो भने पनि चुनाव त हुने होइन । पार्टी विभाजनले झन् औपचारिकता पाउँछ र चिह्नविहीन भएर ओली चुनावमा जाने सम्भावना रहन्न । यदि, केही सीप नलागेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा जाने मनसि्थति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
विघटन बदर भयो भने अविश्वास प्रस्ताव या नैतिकताको कसीमा उहाँको पद जान्छ । अन्योलग्रस्त सांसदहरुले उहाँको साथ छाड्छन् र जनता समाजवादीसँग मिलेर प्रचण्ड–माधव नेकपाले सरकार चलाउँछ ।
अहिले न्यायाधीशहरूले वकिलसँग प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिकूल हुने गरी प्रश्न सोध्ने क्रमले केपी ओलीमा निराशा छाएको देखिन्छ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भेट्न र कुरा गर्न चाहेका मानिसहरूप्रति प्रधानन्यायाधीशले त्यति रुचि नदिएपछि बालुवाटारमा …के–हो, कसो होÚ भन्ने शुरु भइसकेको बताइन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री गल्ने क्रम शुरु भएको छ ।
भनिन्छ, संसद पुनःस्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री ओली गल्ने क्रम एक घण्टामा सय डिग्री बढ्दै जान्छ ।
किनभने, मध्यफागुनमा टुंगो लगाएर वैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन । अर्थात्, चुनाव सर्दै जान्छ । त्यसबेला केपीकै मान्छेहरू पनि अत्तालिन्छन् । र, उनीहरूले नै प्रचण्ड–माधव समूहसँग एकताको प्रस्ताव लिएर पुग्छन् । यदि एकता सम्भव भएन भने चुनावी तालमेल गरेर जाऔँ भन्नेमा पुग्छन्, उनीहरूले आफ्नो पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई भोट हालौँ भन्न सक्दैनन् ।
ओली पक्षको सबभन्दा ठूलो क्षति हुने चरण भनेको सर्वोच्चको अधिवेशन बोलाउने मितिसहित संसद् बहाली गर्ने फैसला गर्दा हो ।
त्यस्तो फैसला हुनु उक्त समूहका लागि पराजय त हो नै, विघटनलाई …चुनावको सुन्दर कल्पनासँग तुलना गर्ने हरूले उहाँको साथ छोड्ने लगभग निशि्चत छ । किनभने, सरकारी नियुकि्त पाएका वा लाभमा रहेका बढी मानिस ओली समूहतिरै छन् । –जनआस्था साप्ताहिकबाट
अब बामदेव गृहमन्त्री बन्दैँछन् ? बादलको के होला ?
अन्ततः खुलेरै राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध उत्रिए उपराष्ट्रपति पुन !